Inkolo eMorocco | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana Maria Urbano Mateos | | Morocco
IMorocco lilizwe lenkolo, kwaye ngokutsho kwe CIA ihlabathi Incwadi yenyani, 99% yamaMoroccans ngamaSilamsi. UbuKristu yinkolo yesibini enkulu kwaye ibiseMorocco ukusukela ngaphambi kokufika kwe-Islam. Ambalwa amaJuda elizweni nanjengoko uninzi lwabo lubuyele kumazwe angqongileyo, no-Israyeli efumana uninzi lwamaJuda abuyileyo. Kwiminyaka yakutshanje inani labantu abangakholwayo liye lenyuka eMorocco.
1 Inkolo eMorocco yamandulo
2 Uluntu lwamaSilamsi
3 KwiMorocco yanamhlanje
4 Iinkolo kunye nabantu abambalwa abakholelwa kubukho bukaThixo
5 Amalungelo enkolo kunye nenkululeko eMorocco
6 I-Islam: inkolo yelizwe
Inkolo eMorocco yamandulo
Ilizwe, elalikade lihleli ikakhulu yiBerbers, lahlaselwa kuqala ngamaFenike, kwalandela amaCarthaginians, kwaza emva koko kwalandela amaRoma. Unqulo lwamaJuda lolona lude Imbali yeenkolo eMorocco.
Ubukho bayo bususela kumaxesha aseCarthagine ngo-500 AD. Amanani amaninzi amaJuda eza eMorocco emva kokutshatyalaliswa kwetempile yayo yesibini ngamaBhabheli. Inkqubo ye- UbuKristu bathatha ngexesha lamaRoma, kwaye amaYuda ajongene nocalucalulo kwiNgqobhoko exhaswa ngurhulumente ngeli xesha.
Ngo-680 AD, ama-Arabhu ahlasela ilizwe, nabemi bayo baguqukele kubuSilamsi. Ukungena kwesibini kwamaYuda kwafika eMorocco emva kwesigqibo seAlhambra se1492, esabagxotha eSpain.
Ngo-680 AD, ii-Umayyads, iqela lama-Arabhu elalivela eDamasko, lahlasela umntla-ntshona we-Afrika, lazisa ubu-Islam. Ngokuhamba kwexesha iiBerbers zomthonyama eziguqukele kubuSilamsi zanda ngo-788 AD, xa u-Idris I wezenkolo zenkolo yamaShiite waseka eyokuqala Ubukhosi bamaSilamsi eMorocco.
Ngenkulungwane ye-XNUMX, iiAlmoravids zaseka ubukhosi obuquka uninzi lweMorocco yanamhlanje kwaye zenziwe isikolo Maliki yomthetho, isikolo samahlelo eSunni, ubukhulu becala eMorocco.
AmaSilamsi oyisile eMorocco ukusukela ngenkulungwane ye-XNUMX, kunye nomnombo wama-Alawite ungqina uMprofeti uMuhammad njengokhokho. Isibini kwisithathu samaSilamsi eMorocco asecala lika Ihlelo lamaSunni ngelixa i-30% ingamaSilamsi angengawo amahlelo. AmaSunni akholelwa ukuba utata wezopolitiko yayinguMuhammad Abu bakr Wayengumbusi wayo wokuqala.
Kunoko, Los ishiites Bacinga ukuba yayi-ali ibn Abhi i-talib, umkhwenyana wakhe kunye nomzala wakhe. Isikolo esiphambili samaSunni eMorocco sisikolo seMaliki solawulo lwezomthetho, esixhomekeke kwiKurani kunye ne-hadith njengemithombo ephambili yokufundisa.
Iinkolo kunye nabantu abambalwa abakholelwa kubukho bukaThixo
Inani lamaJuda eMorocco linciphisiwe kakhulu xa kuthelekiswa namanani abhalwe kumaxesha angaphambili. Uninzi lwawo lwafudukela kwilizwe lakwa-Israyeli elasekwa ngo-1948. Abanye bafudukela eFrance nase Canada.
Ukholo Baha'i inabalandeli abaphakathi kwe-150 nama-500 eMorocco. Inkolo, eyasekwa ngenkulungwane ye-19, ikholelwa kuThixo omnye kwaye ikholelwa kubunye bokomoya babo bonke abantu. Abanye abantu baseMorocca bachonga njengabangengabo abenkolo, nangona banokubaninzi kunale bayithethayo, nangona kunjalo, kuba uninzi lukholelwa ekubeni bagcina ukungakholelwa kwabo kuThixo kuyimfihlo kuba besoyika ukucalulwa, nto leyo ibandakanya oko kwaziwa ngokuba kukudingiswa kwezopolitiko.
Amalungelo enkolo kunye nenkululeko eMorocco
Nangona umgaqo-siseko unika Abantu baseMorocc inkululeko yokunqula bafuna, kuba ikhowudi yelizwe yokugweba iqulethe imithetho eliqela ecalucalula abo bangengomaSilamsi, umzekelo: Lulwaphulo-mthetho eMorocco ukuba neBhayibhile yamaKrestu ebhalwe ngesiArabhu.
Lo mthetho wenzelwe thintela ukuguqula abantu ukusuka kumaSilamsi ama-Arabhu ukuya nakwezinye iinkolo. IMorocco iyaphawuleka phakathi kwamazwe ama-Arabhu ngenxa yohlobo lwayo olunyamezelayo lwamaSilamsi. Isimo sengqondo sokunyamezelana sinokuchaza umtsalane welizwe kubakhenkethi abavela kwihlabathi liphela. Ikwanika ingxelo yokuba ilizwe liyakhusela kwiziseko zonqulo.
I-Islam: inkolo yelizwe
Namhlanje I-Islam yinkolo yelizwe Umiselwe ngokomgaqo-siseko kwaye inkosi iyakuqinisekisa ukuba semthethweni kwayo njengentloko yelizwe kunye nenkolo - ngokuyinxenye, ukuba semthethweni kwakhe kuxhomekeke kwibango lokuba uyinzala yomprofeti uMuhammad. Malunga ne-⅔ yabemi ngamaSunni kwaye ama-30% ngamaSilamsi angengawo amahlelo. Umgaqo-siseko unika amalungelo kunye nokukhusela kwi-Islam ngokungafaniyo nezinye iinkolo, kubandakanya nokwenza ukuba kungabikho semthethweni ukuzama ukuguqula umSilamsi ube yenye inkolo.
Ubukumkani baseMorocco bubukumkani basepalamente ngokomgaqo-nkqubo norhulumente onyuliweyo. Ukumkani wangoku, uKing Mohammed VI, ukwisikhundla sokuba yinkokheli yezopolitiko kunye ne "Nkosana Yabakholwayo" (inxenye yesihloko sakhe esisemthethweni) - ke ngoko unamagunya olawulo kumasebe ezomthetho kwaye uyintloko yezenkolo kwaye zonke iinkokeli zonqulo zingaphantsi i.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Inkolo eMorocco